Howlgal ka socda Magaalada Kismaayo kadib weerar khasaaro geystay oo ka dhacay -News and information about Somalia
Home Warkii Howlgal ka socda Magaalada Kismaayo kadib weerar khasaaro geystay oo ka dhacay
Wararka warkii.com ee magaalada Muqdisho ay ka helayso magaalada Kismaayo aya sheegaya in halkaas uu ka dhacay howlgal ay samaynayeen ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland.
Howlgalkaan ayaa ka dambeeyay Weerar Bambaano oo xalay lagu qaadey Goob Ganacsi o ku taalla isgoyska Golol kuna dhow aargada magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ee Maamulka Jubbaland islamarkaana uu khasaaro ka dhashay.
Bamgacmeedka xalay lagu weeraray magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku geeriyooday laba Ruux iyada oo 13 kalana ay ku dhaawacmeen,hase’ahatee loola cararay Isbitaalka weyn ee Magaalada Kismaayo.
Weli majiro masuul ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka hadlay dhacdadaan,waxaana jiray howlgal ay sameeyeen ciidamada mamaulka Jubbaland eek u suganaa gudaha magaalada.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ay ku waramayaan in manta ay ka socdaan howlgallo kala duwan oo ay sameynayaan Ciidamada Booliska iyo Nabadsugida Jubbaland,inkasta oo weli aysan jirin cid ay usoo qabteen weerarkii xalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo.
Previous articleIMF iyo Bangiga Adduunka oo sheegay Somalia in ay u qalanto deyn Cafin
Next articleMW Farmaajo oo eedeyn culus u jeediyay dowladda Kenya kana hadlay amniga dalka
Xiisad U Dhexeeysa Puntland Iyo Soomaaliland Oo Maanta Taagan